Qarax ayaa dhacay Madaxtooyada - BBC Somali - Warar
Qarax ayaa dhacay Madaxtooyada
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 29 Janaayo, 2013, 10:27 GMT 13:27 SGA
Albaabka hore ee xarunta Madaxtooyada Muqdisho
Masuuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan laba qof ay ku dhinteen markii qof bam isku soo xiray uu isku qarxiyay meel u dhaw xafiiska Raiisul Wasaaraha ee agaalada Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in qofku uu is qarxiyay markii ay suaallo weydiiyeen ciidamada ammaanka meel koontarool ah oo u dhaw xafiiska.
Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya, Cabdullaahi Ciilmooge Xirsi ayaa saxaafadda u sheegay in ninka is qarxiyay uu horey uga tirsanaan jiray al-Shabaab, uuna ku soo biiray ciidanka nabad-sugidda dowladda, laakiin dhawaan laga eryay shaqada oo ay baarayaan faylkiisa.
Qaraxa ayaa waxa ku dhaawacmay saddex qof oo kale.
Xafiiska ayaa waxa uu ku dhexyaal dhismaha xarunta Madaxtooyada ee magaalada Muqdisho.